AKADEMIA MIARAMILA : Nampiseho ny fahaiza-manaony ireo mpianatra ho manamboninahitra – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:41
Accueil/Fanadihadiana Manokana/AKADEMIA MIARAMILA : Nampiseho ny fahaiza-manaony ireo mpianatra ho manamboninahitra
AKADEMIA MIARAMILA : Nampiseho ny fahaiza-manaony ireo mpianatra ho manamboninahitra
Notontosaina ny alakamisy lasa teo, ny lanonana fanolorana mari-pahaizana ireo andia nahavita fiofanana tao amin’ny Akademia Miaramila tao Antsirabe. Ankoatra ny fampisehoana fahaiza-manao notontosaina amin’ny maha miaramila azy ireo, nisy ny fanokanana fotodrafitrasa notanterahina teo anivon’ny Akademia Miaramila. Fanadihadiana…
Rado Harivelo 29 août 2020
Ny Akademia miaramila mamolavola mpianatra ho manamboninahitra.
Notanterahina ny alakamisy 27 aogositra 2020, lasa teo, ny lanonana fanolorana ny mari-pahaizana ireo andia nahavita fiofanana tao amin’ny Akademia Miaramila Antsirabe, “ Fandresena 2020”. Isan’izany ireo Andia mivantana faha-41 misalotra ny anarana “50ème anniversaire de l’Academie Militaire » miisa 67, izay ny Talen’ny Ozinina miaramila ao Moramanga, ny Jly Randriamiaramanana Emma no ray mpiahy ity andia mivantana ity; ny andia Holafy iraisam-piadiana faha-21 miisa 40, izay misalotra ny anarana “Andraina”, ny Lt Kly Andriamizana Marinjaka no mpiahy azy ireo, ary ny andia manokana faha-25, mpianatra ho manamboninahitra mpanamory miisa 19, izay ny Lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika anabakabaka, ny Jly Radona Ratiarivelo no ray mpiahy azy ireo. Ny lanonana dia eo ambany fiahian’ny Filoha faratampon’ny Foloalindahy, ny Filoha Andry Rajoelina ary eo ambany fitarihan’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jly Rakotonirina Richard sy ny Sekreteram-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena miadidy ny Zandarimaria, ny Jly Ravalomanana Richard.
– Ireo vovonana iadian’ny lohany, eo anivon’ny Foloalindahy malagasy.
Nanatrika ny lanonana manana ny maha izy azy, amin’ireto mpianatra nahavita fiofanana ireto, ny Lehibe Etamazaoron’ny Tafika, ny Jly Rabenaivoarivelo Jean Claude, ny Kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena, ny Jly Njatoarisoa Andrianjanaka ary ny Kaomandin’ny sekolin’ny Akademia Miaramila, ny Jly Ramanakavana Jean Henri José sy ireo manamboninahitra miaramila sy sivily.
Nisy araka izany, ny fanavaozana ny toerana fanaovana fanazarantenan’ireo mpianatra ho manamboninahitra “piste d’audace”, notontosaina teo an-toerana. Nambaran’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jly Rakotonirina Richard fa
“ny “piste d’audace” dia entina hanatsarana ny fahasahiana voalohany indrindra, amin’ny maha olombelona. Eo koa ny fahaiza-manao eo amin’ny tetikady manokana sy iraisana eo amin’ireo mpianatra ho manamboninahitra, ahafahan’izy ireo mitondra ny olom-peheziny, anatin’ny fahasahiana ny am-pahamendrehana”.
Fanazarantena tanterahin’ireo mpianatra ho manamboninahitra.
Taorian’ny fanokanana izany, teo anivon’ny Akademia Miaramila, nisy ny fampisehoana fahaiza-manao notontosain’ireo mpianatra nahavita fiofanana ireo, tamin’ireo olo-manan-kaja nanatrika ny fotoana, teo amin’ny toerana fanaovana fanazarantena ara-miaramila. Isan’izany, ny fomba fiatrehana ny fahavalo eny an-tanim-piadiana, ny fomba fanatrehana ireo toe-java-tsarotra, ao anatin’ny tsy fandriampahalemana. Amin’ny maha andia faha-13 nivoaka tao amin’ny Akademia Miaramila, ny minisitry ny Fiarovam-pirenena sy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, dia nanolotra omby roa ho an’ny Akademia miaramila izy ireo.
Mandalo fisedrana maro ireo mpianatra ho manamboninahitra.
Fanatsarana ny toerana…
Marobe ireo manamboninahitra nivoaka teo anivon’ny Akademia Miaramila no tsy nanadino ny Akademia Miaramila nanabe azy. Nambaran’ny Ombimanga ny andia faha-18, ny Kly Rabezandry Maminirina fa “ao anatin’ny fankalazana ny faha-30 taona nivoahana tao amin’ny Akademia miaramila ireo andiany faha-18. Tsy nataonay nandalo fotsiny izany vaninandro lehibe izany, fa nisy ny hetsika notanterahina toy ny fanomezana fanampiana tany amin’ny Toby fitaizana zaza kambotin’ny Tafika sy ny Zandarimariam-pirenena”. Misy koa ny fanavaozana fotodrafitrasa nasiam-panavaozana, dia ny vavahady fidirana ao amin’ny Akademia miaramila ao Antsirabe, izay nandraisan’ny andiany faha-18 anjara ho tambin’andraikitra avy amin’izy ireo, ary indrindra indrindra ho fanamarihan’izy ireo ny faha-30 taona nivoahana teo amin’ity sekoly manofana manamboninahitra ambony ity. Am-pifaliana tanteraka no nanoloran’izy ireo ny fanavaozana fotodrafitrasa ho an’ny taninketsan’ny manamboninahitra, ary koa ho an’ny Foloalindahy rehetra. Tsara ho marihina, fa isan’ireo andiany faha-18 ny Kaomandin’ny sekoly eo anivon’ny Akademia Miaramila.
Fanamiana miavaka no isaloran’ireo mpianatra ho manamboninahitra.
Misy ireo dingana lalovan’ireo mpianatra ho manamboninahitra
Ho an’ireo Andia mivantana faha-41 misalotra ny anarana “50ème anniversaire de l’Academie Militaire”, izay notolorana mari-pahaizana eo anivon’ny Akademia Miaramila, dia tsy nohadinoin’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jly Rakotonirina Richard ny nanafatrafatra ireo manamboninahitra navoaka sy ireo ho manamboninahitra hivoaka, “ fa mila azy ireo ny Foloalindahy malagasy. Mandalo fotoan-tsarotra isan-karazany izy ireo, amin’ny toe-java-misy ankehitriny, indrindra eo amin’ny lafiny fandriampahalemana”.
Tsy mora ny asa miandry ireo avy amin’ny Akademia Miaramila.
Noho izany, manana andraikitra goavana ireo manamboninahitra sy ho manamboninahitra, ny amin’ny fiarovana ny Firenena sy hisian’ny firaisan-kina eo amin’ireo Foloalindahy malagasy. Ao anatin’ny fanavaozan-drafitra rahateo, ny Tafika malagasy ka isan’ny tafiditra amin’izany ny fanatsarana hatrany ny Akademia Miaramila izay taninketsan’ny manamboninahitra. Isan’ny tsy nohadinoin’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena ny fanantitranterana ny maha zava-dehibe ny fanajana ny etika maha miaramila azy ireo, dia ny ho an’ny Tanindrazana. Apetraka ho manana ny maha izy azy ny tombontsoa ambonin’ny Firenena fa tsy ho an’ny tena manokana. Tafiditra ao anatin’izany, ny fiarovana ny ain’ny vahoaka sy ny fananany.
Hentitra ny minisitry ny Fiarovam-pirenena nampita hafatra ireo ho Manamboninahitra.
Ho an’ireo andia misalotra ny anarana « 50ème anniversaire de l’Academie Militaire », miisa 67 ireo mpianatra manamboninahitra, izay nahavita ny fiofanany. Nanomboka ny 9 oktobra 2017, izy ireo no niditra tao amin’ny Akademia miaramila Antsirabe. Ny 61 amin’izy ireo dia teratany malagasy ka vehivavy ny enina, raha miisa 6 kosa, ny teratany afrikanina, izay avy any Gabon. Ny 13 oktobra 2017 izy ireo no nanamarika ny fidirana amin’ny antsoina hoe “Fitaizana”. Ny 10 janoary 2018 indray, no nisian’ny famindrana faneva, izay teo ambany fiahian’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena tamin’izany fotoana. Ny 12 janoary 2018 izy ireo no nankalaza voalohany ny “Andron’ny manamboninahitra”. Nahazo tsodrano tamin’ny ray mpiahy azy ireo ity andia ity, dia ny Jly Randriamiaramanana.
Hery lehibe ho an’ireo ho Manamboninahitra ny fankaherezan’ny Seg, Jly Ravalomanana Richard.
Nandritra ny fiofanana notontosain’ireto mpianatra manamboninahitra, dia misy ny karazana andranasa sy fiofanana ary fampiharana isan-karazany. Isan’ireny ny fanaovana andranasa savaranonando “commando” notontosaina tany Ambatolaona, ny avrily 2018. Ny fanatanterahana fampandriana fahalemana any ambanivohitra, tany Arivonimamo sy tao Antsirabe,ny jona 2018. Tsy nohadinoin’izy ireo koa ny fankalazana ny fetim-pirenena, 26 jona notontosaina tao Antananarivo isan-taona. Ankoatra ireo fitsidihina ireo toerana fizahantany sy ireo heverina ho sompitry ny ara-toekarena, tany amin’ny Faritra Alaotra Mangoro. Ny andranasa savaranonando momba ny “Fusilier marin commando”, ny volana janoary 2020, tany Antsiranana. Nisy ny sekoly mandeha, ny volana marsa 2020 teo. Nofaranana tamin’ny fanohanana voka-pikarohana ahazoana ny mari-pahaizana “Licence en Sciences de la defense”. Tsy nohadinoina ny fanoloran’ny ray mpiahy sabatra ho azy ireo, ny volana aogositra 2020.
Akademia miaramila Foloalindahy manamboninahitra